TAG ထားတယ်ဗျို့: November 2008
TAG ထားတဲ့ဟာလေးတွေကို စုစည်းတင်ပြချင်တယ်ဆိုတဲ့ ကိုပီကေ ရဲ့ အိုင်ဒီယာနဲ့ ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့ ဒီ tag စုစည်းခြင်းဘလောဂ့်မှာ နောက်ဆုံးတစ်ခု tag ထားတဲ့ အချစ်ဆိုသည်မှာကိုပဲ ပထမဦးဆုံး ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါမယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုဖုန်းမြင့်က Tag ထားတယ်ဆိုလို့ ဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ အချစ်ဆိုသည်မှာ တဲ့။ အားပါး ဒီခေါင်းစဉ်က ခေါင်းစဉ်ကြီးတယ် လို့ပြောလို့ရသလို ရေးစရာအချက်အလက်တွေ များစွာ ထည့်လို့ ရပါတယ်။ ကိုယ်ခံစားမိတဲ့ ချစ်ခြင်းတွေကို ရေးလို့ရသလို သမီးရည်းစားအချစ် ကိုလည်း ရေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သာမန်ပါပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ အချစ်အမြင်နဲ့ အချစ်ဆိုသည်မှာ ကို ခုလိုပဲ ရေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုဖုန်းမြင့်ရော စာဖတ်သူများရော ကျေနပ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ (ဖိုးသူတော်)
‘တကယ်ဆိုရင် အချစ်ဟာဘာမှန်းမသိတဲ့ ပုစ္ဆာ၊ အချစ်ဟာ အဖြေရှာ မရတဲ့ ပြဿနာ၊ ကိုယ်ကိုတိုင် အချစ်ဟာ ဘာမှန်းမသိလို့’ ပါဆိုပြီး နိုင်ငံကျော် အဆိုတော် တစ်ဦးဆိုခဲ့တာ ကို သွားသတိရပါတယ်။ တကယ်တော့ အချစ်ဆိုတာကို ရာစုနှစ်အဆက်ဆက် ကဗျာဆရာတွေ၊ သီချင်းရေးဆရာတွေနဲ့ အနုပညာရှင်များစွာကလည်း ဖွင့်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်စိတ်ခံစားချက်ခြင်းမတူသလို အချစ်အပေါ်ခံစားချက်နဲ့ အချစ်ဆိုတာကိုလည်း မြင်တာ တူချင်မှ တူမှာပါ။ အချစ်ဆိုတာ မြင်နိုင်တွေ့နိုင်ခြင်းမရှိပေမဲ့ ခံစားရတဲ့ ခံစားချက်တွေ ထဲမှာတော့ အပီပြင်ဆုံး ခံစားချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သက်ရှိကမ္ဘာကြီးကိုကလည်း အချစ်ဆိုတာနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာပါ။ ဒီအချစ်တွေ ရှိခဲ့လို့ လည်း ကမ္ဘာကြီးဟာ စည်ပင်သာယာလာတာပါ။ အချစ် မှာ ခံစားချက် ခံစားမှု အခြေအနေ အရပ်ရပ်ပေါ်မူတည်ပြီး အချစ် ဆိုတဲ့ စာလုံးအောက် မှာ အချစ်တွေ အများကြီး ကွဲပြားချားနားသွားပါတယ်။
လင်မယားချင်းချစ်ကြတယ်။ ချစ်သူချင်း ချစ်ကြတယ်။ မိဘသားသမီးချစ်ကြတယ်။ မိသားစု မောင်နှမ ချစ်ကြတယ်။ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း ချစ်ကြတယ်။ ဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်းချစ်ကြတယ်။ သွေးမတော် သားမစပ် မသိကျွမ်းပဲ သနားဂရုဏာနဲ့ ချစ်ကြတယ် စသဖြင့် အချစ်ဆိုတာ ကွဲပြားခြားနားသွားပါတယ်။၀ီကီပီးဒီးယားရဲ့အချစ် ဆိုတဲ့ စာမျက်နှာမှာလည်း အချစ်ဆိုတာကို ဒီလိုပြောထားပါတယ်။
( ဘာသာပြန်ရင်မှားနေမှာစိုးလို့ ဟီး ကိုယ့်ဟာကို ပြန်လိုက်နော် :P )
Love is any ofanumber of emotions and experiences related toasense of strongaffection. The word love can refer toavariety of different feelings, states, and attitudes, ranging from generic pleasure ("I loved that meal") to intense interpersonal attraction ("I love my girlfriend"). This diversity of meanings, combined with the complexity of the feelings involved, makes love unusually difficult to consistently define, even compared to other emotional states.
As an abstract concept, love usually refers toadeep, ineffable feeling of tenderly caring for another person. Even this limited conception of love, however, encompassesawealth of different feelings, from the passionate desire and intimacy of romantic love to the nonsexual emotional closeness of familial and platonic love to the profound oneness or devotion ofreligious love. Love in its various forms acts asamajor facilitator of interpersonal relationshipand, owing to its central psychological importance, is one of the most common themes in thecreative art.
ကျွန်တော်ရဲ့ ခံစားမှုနှင့် ဆိုင်တဲ့ အချစ်က တော့ ခံစားမှုပေါ် အလေးထားပေမဲ့ ချစ်တာ သက်သက်ထက် မြတ်နိုးယုံကြည်နားလည်မှုကို ပိုမိုတန်ဖိုးထားပါတယ်။ အချစ်ဆိုတာ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ ထိတွေ့ကိုင်တွယ်လို့ မရပေနဲ့ ခံစားရတဲ့ ခံစားချက် နေရမှာတော့ ထိရောက်လွန်းပါတယ်။ ချစ်ခြင်းများစွာ နဲ့ နှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့ ဒီကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ ကျွန်တော်ကလည်း အဲ့ဒီ နှောင်ဖွဲ့ တဲ့ အထဲမှာ ပါပါတယ်။ အချစ်ဆိုတာ အဲကွန်း အင်ဒိုးယူနစ်လို လေအေးတွေပေးနေတက်သလို တစ်ခါတစ်ရံ အောက်ဒိုးယူနစ်လို လေပူကြီးနဲ့လည်း မှုတ်ထုတ်တက်ပါတယ်။ အချစ်ဆိုတာ လေထီးခုန်သမား လေယာဉ်ပေါ်က ခုန်ချချ ခြင်း အေးကနဲ ခံစားရသလို ခံစားရပြီး လေထီးဖွင့်ခါနီးမှာ လေထီးမပွင့်တော့လို့ အားကနဲ့ ခံစားရတာနဲ့လဲ တူပါတယ်။ အချစ်ဆိုတာ တစ်ခါတစ်ရံ ဖယောင်းတိုင်မီးလောက် လင်းနေပြီး တစ်ခါတစ်ရံ အမွှေးတိုင်မီးလောက်မှောင်နေတက်ပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော အချစ်ဆိုတာ မရှိရင် ဒီကမ္ဘာကြီး မရှိနိုင်သလို ကျွန်တော်လည်း မရှိနိုင်ပါဘူး။
အချစ်ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ရှေးအစဉ်အဆက်ကတည်းက ဖွင့်ဆိုခဲ့သလို ယခု အချိန်အခါထိလည်း ဖွင့်ဆိုလိုမပြီးပါဘူး။ နောက်ကမ္ဘာဆုံးတိုင်အောင်လည်း ဖွင့်ဆိုနေကြဦးမှာပါ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ လူသားများစွာနဲ့ ကမ္ဘာကြီးဟာ အချစ်များစွာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များစွာနဲ့ လှပသာယာလန်းဆန်း နေဦးမှာပါ။
နီနီဝင်း >> ကိုယ့်ရဲ့ အမုန်းဆုံး ဆယ်ချက် ဆိုတာ.................
နေရောင်လာတိုင်း နေ့သစ်တစ်ခုအတွက်ရှင်သန်ခြင်းတွေ ကိုယ့်ဆီမှာ အမြဲပေါ့။
ပြောရမယ့် အချစ်လား အမုန်းလား အရာအားလုံးကို ကိုယ်ခပ်တည်တည်ကြည့် နောက်တော့ရင်ဆိုင်လိုက်တိုင်း
အမှားနဲ့မကင်းတာကို ခေါင်းငဲ့ပြန်ပြောင်း တွေဝေတွေးတောမိတိုင်း အားမလိုအားမရ မဖြစ်မိတာ ကိုယ့်အတွက်
ကိုယ့်ရဲ့အမုန်းရဆုံး ၁ အချက်ပါပဲ။
တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ကြီးပြင်းလာပေမယ့် အရာမထင်တဲ့ ရင်တွင်းမျှော်လင့်ချက် တချို့အတွက်လဲ ကိုယ်က
ထာဝရတောင့်တမိသူတစ်ယောက်အဖြစ် အားမလိုအားမရ ကြေကွဲနာကျည်းမိတိုင်း မလောက်လေးမလောက်စား
လောင်းရိပ်မိကိုယ့်ဘဝကို ရုန်းထွက်ဖို့မကြိုးစားနိုင်တဲ့ ကျေးဇူးသိတတ်မှုအချို့အတွက်လဲ ကိုယ့်အတွက်
ကိုယ့်ရဲ့အမုန်းရဆုံး ၂ အချက်ပါပဲ။
အေးတိအေးစက်နဲ့ သိတတ်မှုနည်းပါး ပျင်းရိမှုအများအပြားနဲ့ အရေးတကြီး ဘဝစာမေးပွဲများစွာတွေမှာလဲ
အမှတ်ကောင်းကောင်းမရတဲ့ လူတကာအသိမှတ်ပြုတဲ့အောက် မိုင်းနပ်စ်မရတောင် ပိုင်းခြေတစ်ရာအပြည့်
ဖြစ်နေရတဲ့ အခြေအနေတွေကိုလဲ မလိုလားပေမယ့် လက်ခံနေတတ်တဲ့ စိတ်ကလဲ ကိုယ့်အတွက်
ကိုယ့်ရဲ့အမုန်းရဆုံး ၃ အချက်ပါပဲ။
မထေမဲ့မြင် ရင်ထဲကခံစားချက်ကို ပြင်းပြစွာပေါက်ကွဲပြဖို့ ဝန်လေး၊ သက်ပြင်းသာအခါခါချ ၊ မှုန်ဝါးတဲ့ဘဝတစ်ခုကို
ဇာတ်ဆရာအလိုကျ စစ်တုရင်ကစားခွက်က နယ်ရုပ်လား ရှင်ဘုရင်လား မြင်းသည်တော်လား တခါတခါ ဖွင့်ဆိုချက်တွေ
မှား မှား သွားရတာကိုလဲ ကိုယ့်အတွက် ကိုယ့်ရဲ့အမုန်းရဆုံး ၄ အချက်ပါပဲ။
ပေါ့သေးသေးထားရမယ့် အကျိုးမဖြစ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အများတကာလို စပ်စုတာတွေတောင်ပုံရာပုံရယ်က မနာလို
ဝန်တိုတာတွေကို ကောက်ကျစ်မှုဗရပွနဲ့ ပတ်သက်နှီးနွှယ်မိတတ်တဲ့ အကျင့်ဆိုးကလဲကိုယ့်အတွက်
ကိုယ့်ရဲ့အမုန်းရဆုံး ၅ အချက်ပါပဲ။
အိပ်ရာထနောက်ကျ အချိန်မတော် ထမင်းထစားပြီး ချစ်သူ့အနား နားပူနားဆာနဲ့ ကကျိုးကဂျောင်ကျရတာကို ဝါသနာထုံ
မိတဲ့ မွေးရာပါအားငယ်စိတ်ကလေးကလဲ ကိုယ့်အတွက် ကိုယ့်ရဲ့အမုန်းရဆုံး ၆ အချက်ပါပဲ။
အများက အာဇာနည်လို့မသတ်မှတ်ပဲ သူရဲကောင်းမဖြစ်တဲ့ ရဲတင်းမှုကို နှလုံးသားကခံစားလက်ခံလိုက်တဲ့ အချစ်ဆိုတဲ့
နူးညံ့မှုတစ်ခုအတွက် ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကို မျက်စိဖွင့်နားစွင့်ပြီး လှောင်ပြုံးတွေသရော်လုံးတွေနဲ့ အမှောင်ဖုံးနေတဲ့
ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ချ ကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ်ပိုင်ကြောင်းပြလိုက်မိတဲ့ အဖြစ်အတွက် နောင်တမရ ပြန်ပြောင်းမရ
တော့တဲ့ ပျိုမျစ်ခြင်းကို နှမြောတသမဖြစ်မိတာကိုလဲ ကိုယ့်အတွက် ကိုယ့်ရဲ့အမုန်းရဆုံး ၇ အချက်ပါပဲ။
အစားအသောက်ဂျီးများ၊ အသန့်ကြိုက်သလောက် ရောဂါထူပြောလှတဲ့ ဘဝကို လှလှပပပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မွေးစကတည်းက
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတဲ့ ပရောဟိတ်က ရှင်သန်ဖို့အခွင့်အလမ်းနည်းတယ်လို့ မှတ်ချက်ချခံရတဲ့ အားနည်းလှတဲ့ ခုခံအားစနစ်နဲ့
လည်ပတ်နေရတဲ့ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုလဲ ကိုယ့်အတွက် ကိုယ့်ရဲ့အမုန်းရဆုံး ၈ အချက်ပါပဲ။
အကင်းမပါး၊ နားလည်မှုခေါင်းပါး၊ ကြင်နာမှုများပြားပြီး ကလေးဆိုးလို ပြုမူဆက်ဆံတတ်တဲ့ ကိုယ့်အကျင့်ကလဲ
ကိုယ့်အတွက် ကိုယ့်ရဲ့အမုန်းရဆုံး ၉ အချက်ပါပဲ။
အပြင်မှာ ပျော်နေသလောက် ရင်ထဲမှာမေတ္တာတရားကလွဲပြီး ငွေအသပြာချမ်းသာခြင်းအလျဉ်းမရှိတဲ့ ဇာတာကို
ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း တွက်ချက်ထားတဲ့ ဗေဒင်အဟောကို အခုတိုင်ယုံကြည်နေမိတဲ့ အခြေအနေကနေမရုန်းထွက်နိုင်
သေးတဲ့ ကိုယ့်အရည်အချင်းကလဲ ကိုယ့်အတွက် ကိုယ့်ရဲ့အမုန်းရဆုံး ၁၀ အချက်ပါပဲ။
ကိုIDULIZE က ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမုန်းဆုံး ၁၀ချက် ဆိုပြီး tag လာလို့ မနည်းစဉ်းစားရတယ်…. အမုန်းဆုံးအချက်ကို.. ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့ မမုန်းမိတော့ အပြစ်တော့ မနည်းရှာရသား…
ခုလောလောဆယ် မုန်းစရာကောင်းနေတဲ့ အချက် ၁၀ ချက်ကိုပြောပြရမှာပဲ….
ပထမအချက် - စိတ်ဆတ်ခြင်း
ဥပမာ- နည်းနည်းရန်စသည်ဟု ထင်လျှင် ချက်ခြင်းဒေါသထွက်တတ်သူ
ဒုတိယအချက် - အားမနာတတ်ခြင်း
ဥပမာ - စာမေးပွဲဖြေမည့်သူအား အတင်းခေါ်ပြီး လေပန်းတတ်သူ
တတိယအချက် - ငြီးငြူတတ်ခြင်း
ဥပမာ - အလုပ် မပြီးမချင်း ဘေးလူများ နားငြီးအောင် ငြီးငြူနေတတ်သူ
စတုတ္ထ အချက် - ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိခြင်း
ဥပမာ - စာမေးပွဲနီးမှ အသည်းအသန် စာဖတ်တတ်သူ
ပဉ္စမအချက် - အလုပ်များကို နေ့ရွှေ့ ညရွှေ့ လုပ်တတ်ခြင်း
ဥပမာ - အလုပ်များရဲ့ deadline ရောက်ခါနီးမှ မအိပ်မနေလုပ်တတ်သူ
ဆဌမအချက် - မဖြစ်သေးသည်များကို ကြိုတင်ပူပန် သောကရောက်တတ်ခြင်း
ဥပမာ - ကမ္ဘာကြီးမပျက်ခင် မဟုတ်တာများ မလုပ်လိုက်ရမည်ကို ကြိုတင် ပူပန်တတ်သူ
သတ္တမအချက် - သံသယများခြင်း သံသယဖြစ်ခံရသူကို အပြင်းအထန်ရစ်ခြင်း
ဥပမာ - ကိုယ့်အား မကြိုက်သူများကို ကိုယ့် အား ကြိုက်နေသည်ဟု ထင်ပါက အတင်း လိုက်မေးတတ်သူ
အဌမအချက် - ပျာယာခတ် နမော်နမဲ့နိုင်ခြင်း
ဥပမာ - စာသင်ထားသည်များကို မှတ်ထားတတ်သော်လည်း မည်သည့်စာရွက်ပေါ်တွင် ရေးမိသည်ကို မသိလောက်အောင် နမော်နမဲ့ နိုင်တတ်သူ
န၀မအချက် - အကောင်းမြင်ဝါဒ အနည်းငယ်သာရှိခြင်း
ဥပမာ - ပစ္စည်းတစ်ခုကို ၁၀၀% မှာ ၀.၉၉% သာ သုံးလို့ရသည်ဟု ပြောတတ်သူ
ဒသမအချက် - အလိုက်မသိခြင်း
ဥပမာ - အချိန်မရွေး အခါမရွေး နေရာမရွေး အလိုက်မသိ ဖုန်းခေါ်တတ်ခြင်း
ရေးထားတာတွေ ပြန်ဖတ်လိုက်တာ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင် အကြည်ညိုပျက်သွားတယ် …….. ဟိဟိ
ကိုIDULIZE ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်…
“ဟားဟား.. ဟားဟား.. ငါဒီမှာကွ.. မင်း အူကြောင်ကြောင်မလုပ်နဲ့ မင်းကို မကျေနပ်လို့ ငါရောက်လာတာကွ...”
ကိုအိကု (idulize) တဂ်လိုက်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မုန်းတဲ့ ၁၀ ချက်ပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြည့်ရမတာတွေကို ပြောပြပါတော့မယ် ...
၁ ။ ။ သံသယကြီးလွန်းတာ
၂ ။ ။ ခေါင်းမာတတ်တာ
၃ ။ ။ အားနာတတ်တာ
၄ ။ ။ အစွဲအလမ်းကြီးတာ
၅ ။ ။ ခံစားနာကျင်တတ်တာ
၆ ။ ။ ဒဏ်ရာတွေကို မမေ့တက်တာ
၇ ။ ။ အူကြောင်ကြောင်နိုင်တာ
၈ ။ ။ ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရင် ဘာမှရှင်းပြမနေပဲ ဇွတ်လုပ်တတ်တာ
၉ ။ ။ ဘယ်တစ်ခုမှ ဖြစ်မြောက်အောင် မတတ်ကျွမ်းတာ
၁၀ ။ ။ အရေးကြီးပြီဆိုရင် ပြောစရာစကားပျောက်သွားတတ်တာ
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဒီလောက်ကြည့်မရဖြစ်နေမှန်း ခုမှ သိတယ်။
သူများတွေဆို ဘယ်လောက်အမြင်ကတ်နေလိမ့်မလဲနော်.... :P
"ဟဲ့.. သမီးလေးအိပ်မက် ! ဘာဖြစ်တာလဲ"
"အော်....သမီးလေးမက်မက်ရယ်၊ ဒီလိုသာ စိတ်တိုလို့ ခွဲရရင် ရှိသမျှ ပစ္စည်းကုန်ပြီပေါ၊့ နောက်မလုပ်နဲ့နော် သမီး၊ ကြားလား"
၁။စိတ်တိုရင် တွေ့သမျှမြင်သမျှ ပစ္စည်း ကောက်လွင့် ပစ်တဲ့အကျင့် :# :@ :z
"ဟဲ့..သမီးလေးအိပ်မက်....အမလေးလေး.. ကိုယ်ကျိုးနဲပါပြီ။ ဘာလို့ သူများမျက်နှာကို သွားထိုး လိုက်ရတာတုန်း"
"စကားပြော ရင့်ပြီး မောက်မာလို့ ။ အမြင်ကတ်လို့ ထိုးလိုက်တာ တီတီဒွင်းရ"
"အော်.. သမီးလေး မက်မက်ရယ်။ အဲဒါဆို ပါးစပ်ကနေ နားလည်လာအောင် ပြောပေါ့။ နောက်ကို ရန်မဖြစ်ရဘူး ကြားလား။တီတီဒွင်း မကြိုက်ဘူးနော်သမီး"
၂။ထစ်ကနဲဆိုရင် စိတ်ဆတ်ပြီး ပါးစပ်က စကားသိပ် မပြောတော့ဘဲ လက်က တွယ်တတ်တဲ့အကျင့်။ :z
"တီတီဒွင်းရေ.. တီတီဒွင်း... မက်မက် နာရီလေးကို ရှာလို့မတွေ့ဘူး။ အဲဒါတီတီဒွင်းတွေ့မိလားဟင်"
"အေး..တွေ့တယ် သမီးရဲ့။ မနေ့ကလေ ကလေးတစ်ယောက် အချိန် နောက်ကျလို့ ကျောင်းမတတ် လိုက်ရဘူး သမီးရယ်။ သူ့အိမ်မှာလည်း နာရီမရှိ ဘူးတဲ့လေ။ အဲဒါ သူ့ကိုသနားလို့ တီဒွင်းလေ သမီးနာရီလေး ပေးလိုက်တာပါ။ အသစ်သွားဝယ် ပေးဖို့ကလည်း အချိန်မရလို့ပါ သမီးရယ်။ ငါ့သမီးလေး မက်မက် အတွက် ဒီနေ့မှ အသစ်ပြန် ၀ယ်လာခဲ့တယ်။ ပတ်ကြည့်ပါဦး သမီးလေးရဲ့။ လှလိုက်တာ။
"ဘာ......အမ်းးး~~..အီးဟီးဟီး~~~ရဖူး..ရဖူး...တမီး နာယီဖဲ တမီး ရိုချင်ဒယ်။ အတစ်ယဲ မရိုချင်ဖူး။ အထုပန် တောင်းပေး... ဟင့်ဟင့်.... "
၃။ဘယ်လောက်ပဲ ဟောင်းနွမ်း စုတ်ပြတ် တန်ဖိုးကျ နေပါစေ အသစ်ကို စိတ်မ၀င်စားဘဲ ကိုယ်တန်ဖိုး ထားတဲ့ အရာကိုပဲ အစွဲအလမ်း ကြီးပြီး မြတ်နိုး တတ်တဲ့အကျင့်။
တစ်နေ့ သိပ်ချစ်ရတဲ့ တီတီဒွင်းနဲ့ တူဝရီးနှစ်ယောက် ရှော့ပင်းထွက်ကြတယ်။ဟယ်... ကြည့်စမ်း.. ရုပ်ရုပ်လေးက လှလိုက်တာ။
"တီဒွင်း..တီဒွင်း.... အဲဒီ ရုပ်ရုပ်လေး လိုချင်တယ်။မက်မက်ကို အဲဒီရုပ်ရုပ်လေး ၀ယ်ပေး"
"နောက်နေ့ကျမှ ၀ယ်နော်သမီး.. အခုဝယ်ရင် ပစ္စည်းတွေ မနိုင်မနင်းနဲ့ သယ်နေ ရမှာပေါ့သမီးရဲ့"
"ဟင့်အင်း..ဟင့်အင်း.. ရဖူး..ရဖူး... အထုချို အထုဖဲ ရိုချင်ဒယ်။၀ယ်ပေး...အထုဖဲ ၀ယ်ပေး။ နောက်ချိုဒါ အထုယောက် ချိတ်မချ ရဖူးဒဲ့။ နောက်မှ ၀ယ်ပေးမယ် ချိုပြီး ထရေးဂို ညာတွားမှာ တိနေဒယ် နော် တီတီဒွင်း..ဟွန်း...မ၀ယ်ပေးရင် တီတီဒွင်းဂို မထော်ဒေါ့ဖူး.. ဒါဖဲ.. ဟင့်"
၄။လိုချင်တာကို မရမက ဇွတ်တောင်းတတ်တဲ့အကျင့်။ :p
"ဟယ်..သမီးမက်မက်... နှမြောစရာကြီး သမီးရယ်။ ဒါက အကောင်း ကြီးဟာကို ဘာလို့ လွှင့်ပစ်လိုက် ရတာတုန်း"
"သမီး မလိုချင် တော့လို့ တီတီဒွင်း၊ ဒါကြောင့် မျက်စိရှုပ်လို့ လွင့်ပစ်လိုက်တာ"
၅။ကိုယ်မလို ချင်တော့ရင် ဘယ်အရာကိုမှ မျက်စိရှေ့မှာ မမြင်ချင်တဲ့ အကျင့်။ :p
"အစ်မ..အကျီ င်္ ချုပ်ခ ဘယ်လောက် ကျလဲမသိဘူး နော်"
"ဟဲ့...ဟဲ့...သမီးမိမက်..အခုမှ ရွေးလာတဲ့ အကျီ င်္ကိုဘာလို့ ကပ်ကြေးနဲ့ တစ်စစီ ညှပ်နေတာတုန်း"
"ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပုံစံကို မချုပ်ပေးလို့ တီဒွင်း။ လိုချင်တဲ့ ပုံစံကို ဒီလောက် နားလည်အောင် အခေါက်ခေါက် အခါခါ ပြောထားရဲ့သားနဲ့ ချုပ်ပေး လိုက်တာကိုလည်း ကြည့်ဦးတီဒွင်းရ"
"ဒါလေးလည်း တမျိုးလေး ကြည့်ကောင်းတာပဲ သမီးရဲ့၊ဘာတွေ စိတ်တိုင်း မကျဖြစ်လို့လဲ"
"ဟင့်အင်း... မကြိုက်ဘူး။ ကိုယ်ပြောတဲ့ အတိုင်း လိုချင်လို့ သူပြောတဲ့ ကျသင့်ငွေကို ဈေး မဆစ်ဘဲ အပ်လိုက်တာ။ မက်မက်က ပြောရင် ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ လိုချင်တယ်"
၆။တိတိကျကျ ဖြစ်ရမှ ကြိုက်တတ်တဲ့ တိကျမှု့ကို ခုံမင်တဲ့ အကျင့်။
"ကောင်မလေး နင့်ရဲ့ xxxကဒ် တော့ရပြီ၊ ဒါပေမယ့် ငါ့ကို ငွေxxxxx ကျပ်ပေးမှ ငါပေးမယ်။
"ဘာ..ဘာ..အော်...အဲလိုလား...ရတယ်ဦးလေး..ဒါဆိုလည်း အဲဒီ xxxကဒ်ကို မယူတော့ဘူး.. ဒီရုံးမှာပဲ ထားလိုက်တော့။တစ်ချို့တွေ ဒီကဒ်မရှိဘဲ လူ့ဘ၀ကို သက်တမ်း ပြည့်နေပြီး သေသွားတဲ့ သူတွေတောင် ရှိသေးတာပဲ ဦးရယ်။ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲမှ မဟုတ်တာ။ ဦးလေးက ကိုယ့်ရာထူးကိုမှ အားမနာပဲ ဒီxxxကဒ်ကို ရောင်းစား သလိုများ ဖြစ်နေသလားလို့။ ကိစ္စမရှိဘူးဦးလေး၊ မျက်စိရှေ့မှာ ကိုယ့်xxxကဒ်ကို အခုမြင် နေရပေမယ့် မယူတော့ဘူး ဦးလေး။ကျေးဇူးပဲ"
၇။ အသေးအဖွဲ ငွေပမာဏပဲ ဖြစ်နေပါစေ။ ငွေစကားပြောပြီး ကိုယ့်ကို လာကတ်ရင် ပြန်ဂျစ်တွန်း တတ်တဲ့ အကျင့်။ :@
"ဦး......ဦးရဲ့ လက်အောက် ၀န်ထမ်းက.........."
"သမီးရယ်...သူက အပြောမတတ် သာပါ။ အဲလို သဘောမျိုးလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဦးတို့မှာက ရုံးအသစ် ဆိုတော့ လိုအပ်ချက်တွေ ဖြည့်ဖို့အတွက် ရန်ပုံငွေ ကောက်တာပါ သမီးရ။ ပန်ကာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ရုံးသုံး ကိရိယာတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊စာရေး စားပွဲတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် သမီးတတ် နိုင်သလောက် လှူလို့ရပါတယ်"
"ဟုတ်ကဲ့ဦး၊ ဦးလိုချိုချို သာသာနဲ့ ပြောပြီးတောင်းရင် အဲဒီလူ တောင်းတဲ့ ငွေပမာဏတင် မဟုတ်ဘူး။ ဒီရုံးတစ်ခုလုံးကို အစအဆုံး ပြင်ဆောက်ပေးပြီး ဦးတို့ရဲ့ ရုံးခန်းကိုပါ လိုအပ်တဲ့ Facility အပြည့် တပ်ဆင်ပေးလို့ ရတယ်။အခုဟာက ငွေပေးမှ xxxကဒ်ထုတ် ပေးမယ်။ငွေမပေးရင် မပေးဘူး ဆိုပြီး အံဆွဲထဲ ပြန်ထည့်ပစ် လိုက်တာကိုတော့ လုံးဝ မကြေနပ်ဘူးဦး။
၈။ကိုယ်မှန်နေရင် ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ကိုယ်မကြိုက်ရင် ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်အရာရှိ အရာခံ ရာထူးတွေ ဂုဏ်ပုဒ်တွေကို ဂရုမစိုက်ဘဲ မကြောက်မရွံ တိုက်ရိုက် အထက် တက်ပြော တတ်တဲ့အကျင့်။ :z :x
"အား...! ခေါင်းကိုက် လိုက်တာ တီတီဒွင်းရယ်၊ မျက်ရိုးတွေလည်း အရမ်းကိုက်တယ်.. ဟင့်ဟင့်.."
"ကြည့်စမ်း၊ကြည့်စမ်း၊ ဒီလောက်နေမကောင်းဖြစ်နေတောင် သူများကို ကူညီပြီး ပုံတွေကို ဆွဲပေးနေရလား သမီးရဲ့၊ သက်သာမှ ဆက်လုပ်လဲ ရသားနဲ့ သမီးလေးရယ်"
"ဟုတ်ကဲ့ပါ တီဒွင်းရဲ့။ သူ့ကို ဒီနေ့အပြီး လုပ်ပေးမယ် ပြောထားလို့ပါ။ မြန်မြန်ပြီးအောင် ကူညီလိုက်တော့၊သူလည်း စောစောစီးစီး ပျော်လို့ ရတာပေါ့ တီဒွင်းရ...နော်"
"ကောင်းပါပြီရှင်၊ ကောင်းပါပြီ၊ ပြောမရမဲ့ အတူတူတော့ ပြီးအောင်သာ လုပ်တော့၊ ပြီးရင် ဆေးသောက်ပြီး စောစောစီးစီး နားလိုက်နော်"
"ဟုတ်ကဲ့ တီဒွင်း..အာဝါးးး "
၉။ကူညီစရာ ရှိရင် ကိုယ့်ကျန်းမာရေးတောင် ဂရုမစိုက်ဘဲ ကူညီပေး တတ်တဲ့အကျင့်။ :p
"ဟဲ့..အိပ်မက်မလေး! အလုပ်ထဲမှာ ဒီလောက် အလုပ်များ နေတာတောင် မရတဲ့ အချိန်ကို ရအောင်ယူပြီး ပို့စ်ရေးနေတဲ့ ညည်းကိုတော့ ကျုပ်ဖြင့် အံ့ပါအေ၊ အံ့ပါ့။ တကယ်ပါပဲ၊ ညည်းကို ကျုပ် ခြေဖျားရော၊ လက်ဖျားရော မကဘူး၊ တစ်ကိုယ်လုံးကိုပါ ခါပါတယ်အေ"
"ဟားဟား..တီဒွင်းရယ်...တစ်ကိုယ်လုံး တော့မခါလိုက် ပါနဲ့၊ လက်ဖျား လောက်ပဲ ခါရင် တော်ပါပြီ၊ တော်နေ ပြုတ်ကျကုန် ပါဦးမယ်...ဟဲ..ဟဲ...:P :P သမီးကို ခင်လို့ တက်ဂ် ထားတာကို သမီးက Follow up လုပ်ရမယ်လေ၊ အခုတောင် နောက်ကျမှ ရေးပေးရလို့ သမီးက အရမ်းကို အားနာနေပြီ တီဒွင်းရ။ ခုရက်ပိုင်း မအားလို့ ပို့စ်အသစ် မတင်နိုင် ဖြစ်နေတာကိုလည်း စာဖတ်သူ တွေကို သမီး မက်မက်က အရမ်းကို အားနာနေတာ။
၁၀။ သူများကို အားနာတတ်တဲ့အကျင့်။ :z :k
ဟဲဟဲ.. အဲဒါတွေကတော့ အဒေါ်ဖြစ်သူ DREAM နဲ့ တူမဖြစ်သူ အိပ်မက်(ခ)မက်မက်တို့ရဲ့ အပြန်အလှန် အသုံးပြုထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ဦးဦးပတ်ကျိလို့ ချစ်စနိုးခေါ်တဲ့ အဲ.. ဟုတ်ပါဘူး မောင်လေးပိစိ က တက်ဂ်ထားတာကို ရေးပေး လိုက်ပါတယ်။ :P ကျေနပ်တော့ ပတ်ကျိရေ... နော်... :P :z :r
မမဝါက ကြွားရအောင်တဲ့။ တဂ်ထားတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲလို့ ခေါင်းခြောက်အောင်စဉ်းစားလိုက်ရတယ်။ ဖိနပ်လေးတွေလည်းကြိုက်တယ်။ အရုပ်လေးတွေလည်းချစ်တယ်။ အကျီင်္လှလှလေးတွေလည်း သဘောကျတယ်။ ခက်တာက မမဝါရေးသလို ပုံတွေတင်ပြီးရေးဖို့တော့ လှတပတလေးတွေရှိဘူး။ အဲဒီတော့ ခက်ပြီပေါ့။ ဓာတ်ပုံလေးတွေပါထည့်ပေးရမယ်ဆိုတော့.. အင်းး.. ဘီလိုလုပ်ရပါ့မလဲ။ မမဝါရေ… အားလုံးကိုသဘောကျတယ်။ ဒါပေမယ့် အားလုံးထဲမှာ အကြိုက်ဆုံးကတော့ စာအုပ်လေးတွေပဲ။ စာအုပ်ဆို ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ဖတ်ချင်နေတတ်တာ။ စာအုပ်တစ်အုပ်ရှိရင် ပြီးပြီ။ ရန်ကုန်မှာတုန်းကလည်း မုန့်ဖိုးစုပြီးတော့ စာအုပ်ပဲဝယ်ဖြစ်တယ်။ ဝေလေးဆီမှာရှိတဲ့ စာအုပ်လေးတွေပဲ ကြွားခွင့်ပြုပါနော်။ စာအုပ်တွေက ရန်ကုန်မှာကျန်ခဲ့တာဆိုတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးလို့လည်းမရဘူး။ အဲဒီတော့ ဓာတ်ပုံတော့ မတင်ပေးနိုင်ဘူးမမဝါရယ်။ တောင်းပန်ပါတယ်နော်။ :)
၂. မဂ္ဂဇင်းဝတ္ထုရှည်များ ၁
၃. သမုဒ္ဒရာခုနှစ်စင်း မြစ်မင်းတစ်ဆယ့်သုံးသွယ်
၄. မဂ္ဂဇင်းဝတ္ထုရှည်များ ၂
၅ ကြွေမလိုနဲ့ဝေ ဝေမလိုနဲ့ကြွေ
၆. ၁၉၈၀ပြည့် အမျိုးသားစာပေ(ဝတ္ထုတို)ဆုရ မဂ္ဂဇင်းဝတ္ထုရှည်များ
၇. ဆဌမအကြိမ် မိုးမိုး(အင်းလျား) အမှတ်တရ ဝတ္ထုတိုပြိုင်ပွဲ(၁၉၉၉)ဆုရ ဝတ္ထုတိုများ
၈. ပျောက်သောလမ်းမှာ စမ်းတဝါး
၉. မေတ္တာ ကမ်းနား အချစ်သစ်ပင်
၁၂. ဝတ္ထုတိုများ ၄
၁၄. ညီမလေးက အချစ်ကိုကိုးကွယ်သတဲ့လား
၁၆. ဝတ္ထုတိုများ ၃
၁၁. ဝတ္ထုတိုများ ၁
၁၂. ဝတ္ထုတိုများ ၃
၁၃. ဝတ္ထုတိုများ ၄
၁၄. ဝတ္ထုတိုများ ၅
၁၅. ဝတ္ထုတိုများ ၆
၁၇. မဂ္ဂဇင်း ဝတ္ထုရှည်များ ၄
၁၈. ဝတ္ထုရှည်များ ၁
၁၉. ဝတ္ထုရှည်များ ၂
၂၀. ဝတ္ထုရှည်များ ၃
၂၁. ဝတ္ထုရှည်များ ၄
၁. ရယ်ရွှင်ဖွယ်နှင့် အခြားစာတမ်းများ
၃. ဖြန့်ထွက်တွေးခြင်းနှင့် အခြားစာတမ်းများ
၁. အောင်သင်း၏အကြိုက်ဆုံး ဝတ္ထုတိုများနှင့်သုံးသပ်ချက်များ (ပထမတွဲ၊ ဒုတိယတွဲ)
၂. အို.. ကိုဖိုးမြင့်နှင့်မစ္စတာစမစ် မင်္ဂလာပါရှင်(ချစ်ဦးညို၊ မင်းလူ ၊ နုနုရည်(အင်းဝ))
၃. ရွှေပြည်တော်မျှော်တိုင်းဝေး(ပ၊ ဒု)
၂. ကြည်းတော၌မိုးခေါ်ခြင်း (ဂျူး၊ နေဝင်းမြင့်)
၃. တစ်ကောင်တည်းပဲ ဒါပေမယ့်ခြင်္သေ့
၂. ဝတ္ထုတိုများ (၄)
စလုံးမလာခင် စာအုပ်စာရင်းပြုစုလာခဲ့တာ အတော်ပဲဖြစ်သွားပြီ။ ဟိဟိ ။ အဖေဝယ်ထားတဲ့ တရားစာအုပ်တွေမပါသေးဘူး။ ဒါတွေက ဝေလေးအတွက်ဆိုပြီးဝယ်ပေးထားတဲ့ စာအုပ်စာရင်း။ စာအုပ်တွေကကျန်နေဦးမလားတောင်မသိဘူး။ သူများဌားထားလို့ စာရင်းထဲမပါလာတာတွေလည်းရှိအုံးမလားပဲ။ အခုတော့ ဦးလေးအိမ်မှာထားခဲ့ရတယ်။ :) မမဝါရေ ကျေနပ်ပါနော်..
P.S >> စာရေးဆရာ ဆရာမကြီးများရဲ့ နာမည်တွေကို ဦး ဒေါ် မတပ်ပဲသုံးထားတဲ့အတွက်ခွင့်လွှတ်ပါ။ ရိုင်းစိုင်းလိုတဲ့စိတ်မရှိကြောင်း ဝန်ခံပါရစေ
ကို Zerotrash က Tag ထားပါတယ်တဲ့.....................
၁။ ကော်ဖီအလွန့် အလွန်သောက်တတ်တဲ့အကျင့် (တစ်နေ့ ကော်ဖီထုပ် -၂၀ကျော်သောက်လို့) ။
၂။ ရိုက်ကွင်းတွင် ဟောင်ဖွာဟောင်ဖွာ လုပ်တတ်ခြင်း။
၃။ တဇွတ်ထိုး မလုပ်ဖြစ်အောင်ထိန်းသော်လည်း လုပ်လုပ်ဖြစ်သွားတဲ့အကျင့် ။
၄။ အတွေးနယ် လွန်တတ်ခြင်း ။
၅။ ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရင် တစ်ဖက်သားကို မညှာမတာ ပြောတတ်တဲ့အကျင့် ။
၆။ သူများရည်းစားအတွင်းရေးတွေကို ကဗျာ လုပ်လုပ်ပစ်တဲ့အကျင့် ။
၇။ သီချင်းဆိုရင် မိုက်ကိုလုံးဝ လက်ကမချတော့ခြင်း ။ (အပေါင်းအသင်းတွေကို အားနာဖို့ကောင်း၏)
၈။ မသွားချင်ဆုံး နေရာဖြစ်သော ဆေးရုံသို့ ခဏခဏသွားနေရခြင်း ။
၉။ ညဖက် တော်ရုံနှင့် မအိပ်တတ်ခြင်း ။
၁၀။မရေးနိုင်သေးဘဲ စာမူခ ကြိုကြိုထုတ်တတ်ခြင်း ။
အဟဲ ကျွန်တော် ဒီနေ့မှ ပြန်ပြီး Tag ဖို့ စဉ်းစားလိုက်မိတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ပဲ .........
(၁) ဒေါက်တာ Nyan (ရေးပြီး)
(၂) ညီလေး မင်းယွန်း (ရေးပြီး)
(၃) ညီလေး မောင်ငယ်
(၄) ညီလေး ဟန်လင်းထွန်း
(၅) ညီလေး သီဟငြိမ်
(၆) ညီလေး ဇောင်း (ရေးပြီး)
(၇) ညီငယ် အဲလာ
(၉) ညီမငယ် သွန်းသွန်း
(၁၀) ညီမငယ် ရွှန်းမီ
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အမုန်းဆုံး ၁၀ ချက်တဲ့… tag ထားတော့လဲ ရေးရတော့မှာပေါ့… ခက်တာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မုန်းမှ မမုန်းတာ… သဘောမကျတဲ့အချက်တွေတော့ ရှိတာပေါ့နော်… အဲဒါတွေကတော့ ၁၀ ချက်တောင် က, ပါ့မလားပဲ… အဲဒီ သဘောမကျတဲ့ အချက်တွေပဲ ပြောပြမယ်နော်…
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သဘောမကျတဲ့ အချက်တွေထဲမှာ ထိပ်ဆုံးကရှိနေတာကတော့ ခံစားလွယ်တာ ပါပဲ။ သူများရဲ့ ဘာရယ်မဟုတ်တဲ့ အပြုအမူ၊ အပြောအဆိုလေးတစ်ခုကအစ လိုက်ခံစားနေတတ်တဲ့စိတ်ကို လုံးဝသဘောမကျဘူး။
နောက်တစ်ခုက အားနာတတ်တာ… တခါတလေ ကိုယ်က မှန်နေရက်သားနဲ့ကို အမှားလုပ်ထားတဲ့သူရဲ့ ရှေ့မှာ မျက်နှာပူပြီး အားနာနေတတ်တယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်မအားတဲ့ကြားထဲက သူများကိစ္စအတွက် ငြင်းရမှာအားနာပြီး ကတိပေးမိတာမျိုးကို သဘောမကျဘူး။
တစ်ခုခုဆို ပြတ်ပြတ်သားသား မရှိဘဲ တွေဝေတတ်တာ ကိုလဲ သဘောမကျဘူး။ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ လမ်းကြောင်းကို မလျှောက်ခဲ့ဘဲ တွေဝေတဲ့စိတ်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်လွဲခဲ့တာကို အခုထိ နောင်တရနေတုန်းပဲ။
အဲဒါနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်လို့ ပြောရမလားပဲ… တခါတလေကျပြန်တော့လဲ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ဆုံးအောင် နားမထောင်ဘဲ စိတ်လောကြီးနေတတ်သေးတယ်။ ဘာမှလောစရာ မရှိဘဲနဲ့ သူများစကားကို အလုအယက် ၀င်ပြောတတ်တဲ့ ကျွန်မအကျင့်ကို သိတဲ့သူတွေ သိကြပါတယ်။
နောက်ထပ် သဘောမကျတာက စကားပြောမတတ်တာ… ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တာကို သူများနားဝင်အောင် သိပ်မပြောတတ်သလို အပြောအဆို မတတ်တာကြောင့် စေတနာကနေ ဝေဒနာဖြစ်သွားရတာမျိုးတွေလဲ မကြာခဏ ကြုံရပါတယ်။
စကားအပြောအဆို မတတ်သလို ဟန်မဆောင်တတ်တာ ကလဲ သိပ်တော့ မကောင်းပါဘူး။ စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်း မျက်နှာမှာပါ ထင်ဟပ်ပေါ်လွင်စေတတ်သူမို့ အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ အရမ်းသတိထားရပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ခါ မှတ်မိသင့်တာတွေ မေ့နေတတ်ပြီး မေ့သင့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှ မှတ်မိနေတတ်တဲ့ စိတ်ကိုလဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သဘောမကျတဲ့အချက်ထဲမှာ ထည့်ရပါမယ်။
နောက်ပြီး အစွဲအလမ်းကြီးတတ်တာ… ဒါဆိုဒါမှ စိတ်မျိုးနဲ့ အခြားတစ်ခုကို အစားထိုးဖို့ မလွယ်တတ်တော့ ကိုယ်ပဲ စိတ်ပင်ပန်းရပါတယ်။
နောက်ထပ် သဘောကျစရာ မကောင်းတဲ့အချက်က ခေါင်းမာတတ်တာ ပါ။ မလုပ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုဆို ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက်ပဲ တိုက်တွန်းတိုက်တွန်း မလုပ်ပါဘူး။ လုပ်သင့်မှန်းသိပေမယ့် စိတ်မပါတော့လို့ မလုပ်ခဲ့တာတွေကြောင့် ဘ၀မှာ ရောက်သင့်သလောက် ခရီးမပေါက်ခဲ့ပါဘူး။
နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့တော့ အခုအသက်အရွယ် ရောက်တဲ့အထိ မိဘကို ( အမေ့ကို ) ပြည့်ပြည့်၀၀ လုပ်ကျွေးပြုစု မပေးနိုင်သေးတာ ပါပဲ။ အဲဒီအတွက်တော့ သဘောမကျရုံတင်မကပဲ တခါတလေဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဒေါသထွက်ပြီး မုန်းတီးမိပါတယ်။
အဲဒါတွေကတော့ ကျွန်မရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သဘောမကျတဲ့အချက်တွေပါပဲ။ ဒီ tag game လေးကို ကျွန်မသူငယ်ချင်းတွေဆီ လက်ဆင့်ကမ်းချင်ပါတယ်။ သူတို့တွေကတော့
ညီမလေး dodi တို့ပါပဲ… ရေးပေးကြမယ် မဟုတ်လားဟင်…။
မုန်းတဲ့အချက်တွေကတော့ အတော်ပေါ... ဆယ်ချက်ဆိုတော့လည်း ဆယ်ချက်ပေါ့နော်
ဒီအချက်တွေကိုတော့ မေ အမုန်းဆုံးဘဲ
ဒါတွေကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မုန်းတာပါ...
မကောင်းတာတွေ အများကြီး ရှိသေးတယ်။ ( ၁၀ ) ခုပဲ ဆိုလို့လေ...။
ပိုစ့်မတင်ဖြစ်တာလည်း ကြာပြီး ဘလော့လည်းသိပ်မလည်ဖြစ်ဘူး။ ဘာတွေရှုပ်နေတာလဲလို့တော့ မမေးနဲ့ ကျနော်ကိုယ်တိုင်တောင် မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ကယ်ရှုပ်နေတာ။ ဒီနေ့လည်း ဘာရယ်ဟုတ်ပါဘူး အိမ်တံခါးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်နဲ့ ကိုနေလင်းက တံခါးဝမှာ ညီလေးမော်စီရေ တက်ထားတဲ့ ရေးပေးပါအုံးနော်တဲ့။ အင်း အဲဒါနဲ့ ဟုတ်ပြီးလေ တက်ထားတယ်ဆိုတော့ ရေးရတော့မယ်ဆိုတာ သေချာနေပြီး။ ဒါပေမယ့် Holiday မှာရေးပါ့မယ်ဆိုပြီးကိုနေလင်း စီဗုံးမှာသွားအော်မလို့ သူ အစားသောင်းကျန်းတာကိုဖတ်ပြီး အားကျတာနဲ့ ချက်ချင်းပဲရေးလိုက်တာပါ။
ကျနော် မိဘတွေဆီက စောစောစီးစီးအမွေရထားတာတွေရှိတယ်။ ကျနော့်အဖေက ဖြစ်သလိုအိပ်တတ်တယ် ဖြစ်သလိုတော့ မစားနိုင်ဘူး။ အဲ အမေကကျတော့ ဖြစ်သလိုတော့ စားနိုင်တယ် ဖြစ်သလိုမအိပ်တတ်ဘူး။ အဲဒီတော့ ကျနော်က ဖြစ်သလိုမအိပ်တတ်သလို ဖြစ်သလိုလည်း မစားတတ်တော့ရော။ ဒါပေမယ့် အစားအသောက်မှာတော့ သိပ်ကျီမများပါဘူး။ ဟိုဟာမစား ဒီဟာမစားရှောင်တာလဲ သိပ်တော့မရှိပါဘူး။ ဟို ဘုရားဟောထားတဲ့ မစားသင့်တဲ့ အသားဆယ်မျိုးကလွဲရင် ရေသူမတောင် အောက်ပိုင်းရရင် စာချင်သေးရဲ့။
သို့ပေမယ့်လည်း ခရမ်းချဉ်သီးကတော့ ကျနော့်ရန်သူပဲ။ ခရမ်းချဉ်သီးကို မစားချင်လို့မဟုတ်ဘူး စားလို့မရတာ။ စားမိလို့ကတော့လား အရင်စားထားတဲ့အစာတွေ တစ်ခုမကျန်ပြန်ထွက်တော့တာပဲ ပြီးရင်း မူးသလိုလို အန်ချင်သလိုလိုနဲ့။ ခရမ်းချဉ်သီးကလွဲရင် ကျန်တဲ့အသီးအရွက်မှန်သမျှ အကုန်လွေးပါတယ်။ အဲ ခရမ်းချဉ်သီးကို မစားပေမယ့် ခရမ်းသီးကျတော့ တော်တော်လေးကြိုက်မိပါတယ်။
မော်စီနဲ့ သူ၏ ၀ါးတီးများ
ကျနော် မုဒုံမှာနေတုန်းကတော့ ၀က်သားတုတ်ထိုးဆိုင်ဆို မကြာမကြာရောက်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီ ၀က်သားတုတ်ထိုးဆိုင်က အဒေါ်ကြီးအိမ်ပြင်တာ ကျနော့်ပိုက်ဆံအများကြီးပါတယ်။ ပြီးရင် ကြေးအိုးနဲ့ ဆီချက် ကိုတော့ တစ်လှည့်စီပေါ့။ ကြားထဲမှာ ထမင်းပေါင်းက ပါလိုက်သေးတယ်။ နောက်တော့ ပလီရှေ့က စာမူဆာသုပ်ကလည်းမလွတ်ပြန်ဘူး။ ပြီးတော့ ကန်ကြီးက ဘူးကြော်နဲ့ ကြာဇံဟင်းခါး ကလည်းကောင်းနေတော့ သွားစားဖြစ်တာပေါ့လေ။ မနက်ပိုင်းမှာဆိုရင် ဘိုတဲထိပ်က မုန့်ဟင်းခါး၊ အုန်းထမင်း၊ သင်္ကြန်ထမင်း၊ နန်းကြီးသုပ် တစ်လှည့်စီ ပုံမှန်သွားစားတယ်။
ဖြစ်သလိုစားတယ်ဆိုပြန်တော့ ဘယ်လိုပြောမလဲ အဲလိုစားဖို့သောက်ဖို့ သိပ်အဆင်မပြေတော့တဲ့အခါမှာတော့ ကြက်သွန်သုပ်စား တယ်ဗျ။ အဆင်မပြေတဲ့အခါ ကြက်သွန်သုပ်က စားလို့တော်တော်ကောင်းတယ်နော်။ ကျနော့်ကြက်သွန်သုပ်က ဒီလိုဗျ …. ကြက်သွန်နီ နှစ်လုံးလောက်ကို ပါးပါးလေးလှီး၊ ဆီအနည်းငယ်ထည့်၊ ပြီးရင် ငရုတ်သီးမှုန့်လေးထည့်၊ ပုဇွန်ခြောက်လေးရှိရင်တော့ ရှယ်ပေါ့ဗျာ မရှိရင်တော့ ငံပြာရည်လေးနည်းည်းထည့်လိုက် အဲ နည်းနည်းချင်စေချင်ရင်တော့ သံပုရာရည်လေးညစ်ထည့်လိုက်ပေါ့ ပြီးရင်တော့ လွေးပေတော့ဗျို့။ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ ကြက်ဥကြော်စားတယ် အဲလိုမှမဟုတ်ရင် ခေါက်ဆွဲပြုတ်စားဖြစ်တယ်။ အခုတစ်လော အစားအသောက်အဆင်ပြေနေလို့ ကြက်သွန်သုပ်တောင် မစားဖြစ်တာ အတော်ကြာပြီး။
ကြက်သွန်သုပ်ကို ကျနော်ပြောတဲ့အတိုင်းတာ သုပ်စားကြည့်လိုက် စွဲသွားစေရမယ်။ မယုံမရှိနဲ့နော် အဲဒါတစ်ကယ့် ဖြစ်ရပ်အမှန်တွေ။ ကဲ့ ကိုနေလင်းရေ ရေးလိုက်ပြီးဗျို့။ တစ်ခြားသူတွေကိုတော့ လိုက်မတက်တော့ပါဘူးဗျာ ကျနော်အခုတလော ဘလော့သိပ်မလည် ဖြစ်သေးလို့။ဘလော့ဂါမောင်နှမများအားလုံး ပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျာ . . .
၂။ ဘာမဆို သူများနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီး စဉ်းစားတတ်တာ
၃။ သူများတွေ ဘာပြောမလဲဆိုတာကို အရင် တွေးတတ်တာ
၁၀။ စိတ်မပါရင် ဘာမှ မလုပ်ချင်တတ်တာ
အခု ပို့စ်လေးကတော့ မမ၀ါ နဲ့ ညီငယ် ကေမောင်ငြိမ်း တို့ tag ထားတဲ့
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမုန်းဆုံး ၁၀ချက်ကို ပြန်လည်ဖြေခြင်းပါ
ကဗျာလေးနဲ့ ရေးဖွဲ့ပြီး ပြန်လည် ဖြေလိုက်ပါတယ်.. အစ်မနဲ့ ညီငယ်ရေ..
ကျေနပ် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါစေ... ပြန်တက်မယ့်သူတွေကတော့
မယ်မဒီ ၊ ဆုဝေ ၊ကဗျာချစ်သူ (ခေးရော့စ် ) ၊ မိုးဦးဝေလွင်
ခေါင်ခေါင် ၊ ချင်းမလေး ၊ စိတ်ဖြေရာ ၊ မီးတောက် ၊ ပုလဲ
ပန်းခင်းလေး ၊ အလင်းစေတမန် ၊ ညခင်းရဲ့လမင်း ၊ မီးလေးဇာ
ဝေလေး ၊ တာတာ ၊ သဉ္ဖာ ၊